Sivilizasiona, Jadona sy Fitroarana: Tantaran’Izao Tontolo Izao Araka Ny Fijerin’ny Vehivavy Kolombiana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2016 8:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Ελληνικά, Español
Uribe ao amin'ny fandaharan-tantara iray. Sary nozaraina tao amin'ny Google, nahazoana alalana.
Nandritra ny taona maro no nandrotsirotsy ny Kolombiana ny feon'i Diana Uribe. Toa lasa akaiky kokoa izao tontolo izao, ary matsilo kokoa ny saina noho ny tantara lazainy.
Inoin-teny manerana an'i Kolombia ity mpilaza vaovao amin'ny radio, 57 taona, efa nahazo loka tamin'ny filazam-baovao ity. Ankehitriny, noho ny fisian'ny aterineto, dia manana mpankasitraka sy mpanjohy manerana an'i Amerika Latina, eny fa manerana izao tontolo izao mihitsy aza, ny programany amin'ny teny espaniola natao podcast ary efa vonona ao amin'ny sehatra Ivoox ireo fandaharana maro natombony tao amin'ny Radio Caracol [Radio Sifotra] tao Kolombia mitondra ny anarana hoe: “Tantaran'Izao Tontolo Izao”, ary efa mahazo ny YouTube ihany koa izay hananany mpanjohy mihoatra ny 75K.
Efa an'hetsiny ireo nijery ny seho nataony tao amin'ny YouTube momba an'i Japan, Shina, Panama, Espaina ary ny Revolisiona Islamika.
Misafidy faritra iray eto amin'izao tontolo izao i Diana Uribe ka mampifandray ny tantaran'izany toerana izany amin'ny zavamisy hitantsika ankehitriny. Mifantoka amin'ireo olo-malaza ara-tantara ny fandaharany. Maharitra ora iray ny fandaharana tsirairay ary elanelanin'ny hira mamolivoly. Ny lohahevitra raisiny no mamoaka fa mitovy daholo ihany isika rehetra fa ny hany tsy mampitovy ireo faritra isan-karazany eto amin'izao tontolo izao dia ny fotoana sy ny toerana ihany.
Fa mahazo fifantohana manokana kosa ny tantaran'i Amerika Latina, tsarovana sy asongadina ireo mpihira sy mpanoratra nanamarika ny vanim-potoana sarotra sy nampisy fiovana teo amin'ny tantara. Amin'ireny fizaran-tantara ireny i Diana Uribe no mampifandray ny zava-nitranga amin'ny olana ara-politika misy amin'izao fotoana. Ity ohatra ny tantaran'ny fifindra-monina tao Arzantina, izay itantaran'i Diana Uribe ny mahatonga an'i Arzantina ho manana mari-panondroana ara-kolontsaina isan-karazany, sy ny fampifandraisany izany amin'ny olona ara-pifindramonina amin'izao fotoana izao:
Betsaka ny zavatra azon'ny rehetra natao tamin'ny fotoana nifindra-monina avy any Eoropa nankao Arzantina. Amin'izao fotoana izao dia miampita an'i Mediteranea noho ny antony mitovy indrindra ireo mpifindramonina : ny hanoanana, ny ady, ady izay matetika vokatry ny fanapahan-kevitra aoropeana noraisina tamin'ny famakivakiana ny Ampira Ôtômanina, na vokatry ny fametrahana sisintany nataon'olombelona. Amin'izao fotoana izao, avy any Syria, Afrika, ireo mpifindramonina miampita an'i Mediteranea […]. Taorian'ny fisamatsamahan'ny ampiram-panjanatany sy izay rehetra nitranga tamin'izany fotoana izany, ny ady natsangana taorian'ny 11 septambra, taorian'ireny fihetsiketsehana jeopolitika rehetra ireny, dia tsy misy na inona na inona intsony ho azy ireo, tsy misy tany, tsy misy saha, tsy misy fahafaha-manao zavatra, tsy misy mandray.
Fandroahana no azon'izy ireo […] Faniratsirana no azon'izy ireo, fankahalana vahiny […] Nampian'izao tontolo izao ny Eoropeana. 40 tapitrisa ny Eoropeana noraisina tao Amerika. Ary amin'izao fotoana izao, raha mba angatahana fanampiana ny Eoropeana dia sakana, harato, rindrina, fefy tariby misy motiny, rindrina ara-taratasy no asetriny. Misara-kevitra sy misara-tsaina mba tsy hanaovana tolo-tanana amin'ireo vahoaka efa nanao tolo-tanana anao tamin'ny fotoana hafa. Izay no mahasamihafa ny mpifindramonina mameno an'i Arzantina sy ny mpifindramonina nanova an'i Mediteranea ho fasana ho an'ny daholobe.
Voamarika ao amin'ny Wikipedia ihany koa ny asan'i Diana Uribe :
Tamin'ny taona 2008 izy no namoaka ny boky am-peo voalohany, La historia de las civilizaciones [Tantaran'ireo sivilizasiona], izay namoahany ny fomba fijeriny amin'ny fotoana sasantsasany tamin'ny tantaran'ny olombelona. Tamin'ny taona 2009 izy no namoaka ny boky amim-peo faharoa, nantsoina hoe La historia de las independencias [Ny Tantaran'ireo Fahaleovantena], izay miompana amin'ny fahaleovantenan'ny kaontinanta latino-amerikana tamin'ny taonjato faha-19. Tamin'ny taona 2011 izy no namoaka ny fahatelo, La historia en los viajes [Ny Tantara eny am-pandehanana], izay niresahana an'i Rosia, Torkia ary i Afrika Atsimo. Tamin'ny taona 2013 izy no namoaka ny fampiasa El juego de la historia [Lalaon'ny tantara].
Manampahaizana manokana momba ny hetsika mpanohariana ara-kolontsaina tamin'ny taompolo 1960 i Diana Uribe. Liana mandrakariva amin'ny angano sy arira ao amin'ny fakana sary an-tsaina amin'izao fotoana izao ihany koa izy, indrindra fa ny lovantsofina.